Ukuhlanganiswa kwe-Allegro - Qala Ukuthengisa ku-Allegro nge-Propars E-Export!
Kulula ukuphatha isitolo sakho se-Allegro ngePropars!
Qala ukuthengisa e-Allegro ngePropars, futhi imikhiqizo yakho izothengiswa ePoland!
Ukuthunyelwa ngaphandle kwe-E kulula kakhulu ngokuhlanganiswa kwePropars allegro!
Ama-oda ka-Allegro aqoqwa kusikrini esifanayo nayo yonke eminye imiyalo yakho.
Ungathengisa imikhiqizo oyengeza kwaPropars ku-allegro ngokuchofoza okukodwa.
Indawo yemakethe esekwe ePoland i-Allegro ingumholi ongenambangi wemakethe yaseMpumalanga Yurophu futhi ungumdlali omusha emakethe yaseYurophu. I-Allegro isiphenduke enye yezimakethe eziku-inthanethi eziphezulu ezingu-10 emhlabeni, ngemva kokuthuthuka kwayo okuhle esikhathini esidlule.
Inzuzo enkulu ye-Allegro kubathengisi inombolo yabathengisi eyibamba. Ngaphandle kwenani labasebenzisi abasebenzayo elingaphezu kwezigidi ezingu-24 nsuku zonke, izinga labathengisi epulatifomu liphansi kakhulu kuneleqhudelana nabo. Lokhu kusho ukuncintisana okulula kanye nenzuzo eyengeziwe kubathengisi.
Nakuba i-Allegro inokubukeka kwendawo yemakethe yasendaweni, empeleni iyinkundla evamile yomhlaba wonke, ikakhulukazi eMpumalanga Yurophu.
Kulesi sifunda lapho ezinye izinkundla ezinkulu zingakangeni ngokugcwele, i-Allegro iyisiteshi esithengisa kakhulu.
I-E-Commerce manje iyisidingo kuwo wonke amabhizinisi. Kulokhu, akufanele ushiye yonke i-e-commerce yakho iboshelwe endaweni eyodwa noma isiza. Nakuba iziqhwaga zomhlaba zithatha izintambo, ziningi izimakethe eziqinile ngokwesifunda. U-Allegro ungomunye wabo.
Ikomkhulu layo lihlala e-Poland, le ndawo yemakethe ingakunikeza uhlobo olusha lwemali engenayo lwebhizinisi lakho. Ngaphandle kwalokho; Le makethe, lapho kuthengiswa cishe yonke imikhiqizo futhi nenani labathengisi lingakabi phezulu kakhulu, inenzuzo engaphezu kwesamba sezimakethe ezinkulu ezi-5 eTurkey kuphela.
Kukuwe ukuthi uthuthukise inethiwekhi yakho ye-e-export ngokuthatha indawo yakho kule makethe ye-niche. Okufanele ukwenze ukufinyelela komele i-Propars. I-Propars inguzakwethu wesixazululo we-Allegro eTurkey futhi ikunikeza ukwesekwa kuzo zonke izindaba ozidingayo.
I-Propars Allegro Integration
Ukubambisana kwe-Propar-Allegro nokuhlanganiswa; Ikuvumela ukuthi uqale kalula ukuthengisa ku-Allegro. Ngokusebenzelana okuthuthukisiwe kwe-Propar, ungakwazi ukwengeza i-Allegro kunethiwekhi yakho yokuthengisa kuyilapho ulawula izinkundla zomhlaba kanye nezitolo zakho eziku-inthanethi eTurkey.
E-Allegro, ulimi lwakhe lwebele luyisiPolish, kungenzeka ukuthengisa ngesiTurkey kuphela, ngephaneli ye-Propars. Dlulisela imikhiqizo yakho kuphaneli ye-Propars futhi uyithengise kalula ku-Allegro. Ngaphezu kwalokho, ulwazi lomkhiqizo wakho luzohunyushelwa olimini lwesi-Polish futhi amayunithi okulinganisa omkhiqizo wakho azokwenziwa okwasendaweni ngokuzenzakalela.
Ungabuka ama-oda akho kwa-Allegro kuphaneli eyodwa futhi ukhiphe ama-invoyisi e-e ngokuchofoza kanye.
Ngaphezu kwalokho, uma ungenaso isitolo e-Allegro, ithimba le-Propars livula isitolo sakho se-Allegro mahhala egameni lebhizinisi lakho!